musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Canada Breaking News » Qatar Airways inoratidza makore gumi eCanada nendege
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Canada Breaking News • nhau • Qatar Kuputsa Nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Qatar Airways inoratidza makore gumi neCanada ndege
Kubva 2011, kuzvipira kweQatar Airways kumusika weCanada kwakasimbisa kutengeserana kwepasirese, kushanya uye kuchinjana kwevanhu.
Qatar Airways 'rwendo muCanada rwakatanga muna Chikumi 2011 nendege nhatu dzevhiki kuenda kuMontréal.
Qatar Airways haina kumbomira kubhururuka ichienda kuMontréal mukati meCVV-19 denda.
Kubva payakatanga kubhururuka muna Chikumi 2011, Qatar Airways yanga ichiyerera kanopfuura ka3,400 XNUMX pakati peDhaha neMontréal.
Qatar Airways yakaratidza chiitiko chakakosha munhoroondo yayo neCanada, vachipemberera makore gumi akabudirira kubva payakatanga kubhururuka pakati peDhaha ne Montréal-Trudeau International Airport (YUL). Rwendo rwendege muCanada rwakatanga muna Chikumi 2011 nendege nhatu dzevhiki kuenda kuMontréal, zvichizowedzera kusvika kumana svondo nevhiki muna Zvita 2018 uyezve vachizosvika kubasa rezuva nezuva muna Kukadzi 2021.
Qatar Airways haana kumbomira kubhururuka kuenda kuMontréal mukati meCVV-19 denda, uye nendege iri kuenderera mberi ichipa hupenyu kune vekuCanada vanodzoka kumba kubva pasirese. Mushure mekushanda padhuze neHurumende yeCanada nemamishinari ayo pakukwirira kwehutano hwepasi rose, Qatar Airways yakashandawo zvenguva nhatu mavhiki masvondo kuToronto kuwedzera kune dzakawanda charter ndege kuVancouver kubatsira kuunza kumba vanopfuura zviuru makumi mana nezvina zvevagari vemuCanada nevagari vapererwa kunze kwenyika.
Kubva payakatanga kubhururuka muna Chikumi 2011, Qatar Airways yakayerera kanopfuura ka3,400 1 nguva pakati peDhaha neMontréal, zvichigonesa vangangoita miriyoni imwe yebhizinesi nevaraidzo yekuzorora kuti vabatanidze kunzvimbo dzakakurumbira muAfrica, Asia, Middle East nekupfuura. Basa reMontréal parizvino rinoshandiswa neQatar Airways 'state-of-the-art mafuta-anoshanda Airbus A350-900 iine zvigaro makumi matatu nematanhatu mubairo unohwina muQsuite Bhizinesi Kirasi uye zvigaro makumi maviri nemaviri muEconomy Class. Qatar Airways Cargo inopawo anopfuura matani zana emitoro yemitoro vhiki rega rega munzira yega yega munzira yeDoha- Montréal -Doha.
Qatar Airways 'Group Executive Executive, Akanaka VaAkbar Al Baker, vakati: "Canada yagara iri pedyo nesu kuQatar Airways. Ndinoyeuka kudada kwandainzwa patakatanga kusvika kuMontréal mu2011, uye ndakaziva ipapo kuti kwaingova kutanga kwehukama hwakasimba uye husingaperi neCanada. Kwemakore apfuura takaona zvakanakira masevhisi edu kuCanada ayo anowedzera kupfuura basa redu rekuunza vanhu pamwechete. Kubhururuka kwedu kwakaita kuti vafambi vanobva kumativi epasirese vakwanise kugamuchira vaeni vekuCanada vachitsigira kuburitsa zvigadzirwa zveCanada kumisika yekukunze.